फोनको ब्याकग्राउन्डमा कसरी बजाउने युट्युव भिडिओ ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
फोनको ब्याकग्राउन्डमा कसरी बजाउने युट्युव भिडिओ ?
केवल तपाईंसँग मोबाइल भए पुग्छ । यदि तपाईं एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् । त्यसपछि युट्युव डटकम सर्च गर्नुहोस् र भिडियो प्ले गर्नुहोस् ।
अब सबैभन्दा माथि दायाँ कुनामा तीन ओटा थोप्ला (⋮) भएको बटनमा दबाउनुहोस् र त्यसभित्र रहेको डेक्सटप साइट (Desktop Site) अगाडिको बक्समा चेक गर्नुहोस् । अब युट्युवमा कुनै गीत वा म्युजिक भिडियो प्ले गर्नुहोस् र होम बटन दबाएर बाहिरिनुहोस् ।
यसो गर्दा तपाईंको बजिरहेको युट्युव बन्द हुनेछ । अब आफ्नो मोबाइलको माथि शिरानीबाट तलतर्फ स्क्राेल गरी नोटिफिकेसन प्यानल खोल्नुहोस् र त्यहाँ देखिएको ‘प्ले’ बटन दबाउनुहोस् । अब युट्युवको भिडियो ब्याकग्राउण्डमा आनन्दले बज्न थाल्नेछ ।
त्यहाँ खुल्ने अप्सनमध्ये रिक्वेस्ट डेक्सटप वेबसाइटमा थिच्नुहोस् । यति गरिसकेपछि युट्युवमा आफूलाई मन पर्ने भिडियो प्ले गर्नुहोस् ।